Cash Accountant | Media Storm Co., Ltd. ﻿
22.2.2020, Full time , Advertising / Public Relations
•	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်
•	LCCI Level II or III အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်
•	ကွန်ပျူတာဖြင့် စာရင်းရေးဆွဲခြင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
•	လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။
Work location No. 12A , Shan Gone Street , Myay Ni Gone Sanchaung Township, Yangon.
မြေနီကုန်း တွင် အလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Company Industry: Cash Accountant
Job posted: 22/2/2020
•	အခွန်နှင့် သက်ဆိုင်သော စာရင်းများ ၊ ရှုံးမြတ်စာရင်း နှစ်ချုပ် ၊ လချုပ်စာရင်းများ ပိုင်နိုင်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
•	ရုပ်ရည် ပြေပြစ်၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်
124 Days, Full time , Advertising / Public Relations
• English4skill and Computer Microsoft Office word and Excel Using • အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Cash Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Media Storm Co., Ltd. Accountancy Jobs Accountancy Jobs Cash Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Office Cashier F (1)